လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းယဉ်ကျေးမူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းယဉ်ကျေးမူ
Posted by အညာတမာ on May 30, 2012 in Cultures | 23 comments
ကျတော်ကြုံတွေ့ခဲ့တာလေးကို ရွာထဲမှာ မျှဝေ ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက် ၁၉-၀၅-၁၂ တုန်းက အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို စက်မူဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေးရုံး၊ ကနောင်ခန်းမမှာ ကျတော်သွားတက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲက နှစ်ပိုင်းခွဲဆွေးနွေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းက အလုပ်ရှင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲသူ၊ ညနေပိုင်းက အလုပ်သမားတွေနဲ့ သီးသန့် ခွဲဆွေးနွေးတာပါ။ ကျတော်ကမနက်ပိုင်းတက်ခဲ့ရတာပါ။ ကျတော်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မစမှီ ၁၀ မိနစ်အလိုလောက် ခန်းမကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျတော်ရောက်သွားတော့ လူတွေ တော်တော်စုံနေပါပြီ။ တစ်ချို့က တူညီဝတ်စုံ၊ တစ်ချို့က မြန်မာတိုက်ပုံနဲ့လုံချည်၊ တစ်ချို့ကတော့ အဆင်ပြေရာဝတ်စုံ အမျိုးမျိုး အရောင်အသွေးအစုံပါပဲ။
အဲဒီမှာ ကျတော်ချက်ချင်း သတိထားမိတာကတော့ အရောင်အသွေးအစုံတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယဉ်မူ မဟုတ်ပဲ လူတိုင်း၊ ကျား၊ မ မရွှေး လက်ကိုင်ဖုန်းကိုယ်စီနဲ့ဆိုတာပဲ၊ တစ်ချို့ကခါးမှာချိတ်လို့၊ တစ်ချို့ကလက်ကကိုင်လို့၊ တစ်ချို့ကအော်ကြီးပာစ်ကျယ်နဲ့ တယ်လီဖုန်းပြောလို့၊ တစ်ချို့ကလည်း စကားပြောခွက်ကို လက်ကလေးနဲ့ကာပြီး တိုးတိုးလေးပြောလို့၊ (ရွှေတိုက်တယောက် အုပ်ထိန်းသူ မသိအောင် ကြူတဲ့အထာထင်တာပဲ) တစ်ချို့က လက်ကိုင်ဖုန်းထဲက တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုရှာပြီးဖလှယ်လို့၊ တစ်ချို့ဆိုအော်ကြီးပာစ်ကျယ်နဲ့ ဟိန်းဟောက်တောင်နေလိုက်သေး။ အဲဒီချိန်ထိ အိုကေပါပဲ။ (ကျတော်တို့ရွာသူ/သားတွေနဲများကွာပါ့၊ ပန်းတနော်-အစုကြီးသွားတုန်းက ဘယ်သူမှ လက်ကိုင်ဖုန်းကိုဟန်ရေးတပြပြမကိုင်ကြပါဘူး၊ သဂျီး မဲဖောတ်တဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းကို အလုအယှက်ကိုင်ကြည့်တာကလွှဲလို့ပေါ့)။
ဆွေးနွေးပွဲမှာ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ချုပ်၊ ဒု-ညွှန်ချုပ် နဲ့ လူမူဖူလုံရေးဌာနက ညွှန်မှူးတို့ဆွေးနွေး ပြောကြားကြတယ်။ ဒီနေရာမှာ ညွှန်ချုပ်တွေနဲ့ ညွှန်မှူးတို့ ဘာပြောပြီး ဘာတွေဆွေးနွေးလည်းဆိုတာကို ပြောချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ချုပ်စပြောလို့ စက္ကန့်ပိုင်းပဲရှိသေး၊ ပရိတ်သတ်ထဲကနေပြီး ကလင်…ကလင်…ကလင်…
ညွှန်ချုပ်၊ ခေါင်းထောင်ကြည့်၊ အသံတိပ်သွားတော့ ဆက်ပြော-ဟုတ်ပါဘူး ဆက်ဖတ်… မကြာပါဘူး…ကိုကို့ဖုန်းလာနေတယ်… ကိုကိုရေဖုန်းလာနေတယ်နော်… ကိုကိုဖုန်းလာနေတယ်လေ…(ကိုကြီးမိုက်ရဲ့ ဖုန်း Ring Tone ထင်တာပဲ) ညွှန်ချုပ်၊ ခေါင်းထောင်ကြည့်-သူ မခံစားနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်…ပြောပြီ…လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်လေးတွေပိတ်ထားပေးပါလားဗျာ…တဲ့ ပြီးတော့ ဆက်ပြော-ဟုတ်ပါဘူး ဆက်ဖတ်…ခဏကြာပြန်တော့ ကလေးငိုသံ…ပုရိတ်ရွတ်သံ… သီချင်းသံ…ဟာစုံလိုက်တဲ့ တယ်လီဖုန်းသံတွေ၊ ညွှန်ချုပ်ကြီးလည်း သူ့သြဇာမတည်မှန်းသိလို့ထင်ပါရဲ့ သူပြောစရာ ရှိတာတွေကို ဆက်ဖတ်ပြီး လစ်ပါလေရော…
ဒု-ညွှန်ချုပ်အလှည့် မတိုင်ခင်မှာတော့ အခမ်းအနားမှူးက “လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကို ကျေးဇူးပြု၍ပိတ်ထားပေးပါ” ဆိုပြီးတော့ကြေကြာတယ်…..ဒီလိုနဲ့ ဒု-ညွှန်ချုပ် စပြောပြီ… ဟုတ်ပါဘူး ဖတ်ပြီ်…ဒါပေမယ့်…တယ်လီဖုန်းသံတွေက ရပ်မသွားပါဘူး ဟိုနားကမြည်လိုက်၊ ဒီိနားကမြည်လိုက်ပါပဲ။ ကြားထဲမှာ မိနစ်၂၀ လောက်တယ်လီဖုန်းသံတိတ်နေပြီးမှ “ကိုကိုလူဆိုးကြီး ဘာဖြစ်လို့ဖုန်းမကိုင်တာလဲ ဖုန်းကိုင်လိုက်ပါအုံးနော် ဒီတခါဖုန်းမကိုင်ရင် ကိုကိုနဲ့မခေါ်တော့ဘူး စိတ်ကောက်လိုက်မှာနော် ကိုကို့လည်းမချစ်တော့ဘူး မုန်းတယ် မုန်းတယ် မုန်းတယ် အမြှောက်တစ်သိန်း အဟင့် အဟင့်
အဟင့်…”(ဒါတော့ အားလုံးချစ်ကြတဲ့ ဦးပေါက် Ring Tone နဲ့တူတယ်) အသံမြည်ရာဆီကို တိုင်ပင်မထားပဲ လှည့်ကြည့်၍ ပြုံးသူပြုံး၊ ရီသူရီကုန်၏။
လူမူဖူလုံရေးဌာနက ညွှန်မှူးအလှည့်၊ သူကရော ဘာမို့လို့လဲ တယ်လီဖုန်းသံမျိုးစုံက ဆက်လက် အားပေးလျှက်ပဲ။ အဆိုးဆုံးကတော့ သူ့တပည့်၊ အဲဒီလူကို ကျတော်ကောင်း ကောင်းသိတယ်၊ ပြီးတော့ရင်းနှီးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျတော်တို့စက်ရုံကို လူမူဖူလုံရေးကိစ္စနဲ့မကြာခဏလာတတ်လို့၊ ပြီးတော့ ကျတော်တို့စက်ရုံရှိတဲ့ မြို့နယ်က မြို့နယ်လူမူဖူလုံရေးဌာနရဲ့မန်နေဂျာလေ။ သူက ကျတော့်ရှေ့ကထိုင်ခုံမှာ၊ သူ့ဆရာ ဆွေးနွေးနေတာကို တယ်လီဖုန်းအပြောမပျက် အားပေးနေလေရဲ့။ ဒါကိုသူ့ဆရာမြင်တော့ “မင်းဒီလောက်အရေးကြီးနေရင် အပြင်ထွက်သွားပြောကွာ” တဲ့ ကောင်းလိုက်တဲ့ အထက် အောက် အပြန်အလှန် လေးစားမူ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမန်နေဂျာတယ်လီဖုန်းပြောနေတာက သူ့ဆရာတွေ နေ့လည်စာစားဖို့အတွက်စီစဉ်နေတာ၊ နောက်ကနေကြားနေရတယ်။
ကျတော်လည်းလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ကျေဇူးကြောင့်အာဆီယံတိုင်းပြည်တွေမှာ Conference တွေ Meeting တွေ Workshop တွေ Seminar တွေ Training တွေ တက်ဖူးတယ်၊ (အရေးထဲ ထုပ်ကြွားနေပြန်ပြီ) အစည်းဝေးခန်း၊ သင်တန်းခန်းမထဲဝင်တာနဲ့ အားလုံးက သူတို့ရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်း တွေကို Silence Mood ကိုပြောင်းချင်ပြောင်း ဒါမှမဟုတ် ပါဝါပိတ်လိုက်ကျတယ်။ လိုအပ်လို့ မဖြစ်မနေ တယ်လီဖုန်းပြောစရာရှိပါက ခန်းမအပြင် ထွက်ပြောလေ့ရှိတယ်၊ သူတို့တွေ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။
လက်ရှိအခြေအနေအရ၊ လူတိုင်းလက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းသုံးနိုင်တာဝမ်းသာစရာပါ။ နောက်ပြီး ဒါဟာ အထူအဆန်းမဟုတ် ပေမယ့် လက်ကိုင်ဖုန်းကိုင်ပြီး လူမူရေးနားမလည်တာကတော့ ထူးဆန်းလို့နေတယ်လို့ထင်မိ ပါ၏။ ခေတ်မှီ်လက်ကိုင်ဖုန်း တီထွင်သူတွေဟာ သုံးစွဲသူတွေ အဖက်ဖက်က အဆင်ပြေစေဖို့ အစစအရာရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ထုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားမူကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်အနှောက်အယှက်ကင်းကင်းနဲ့ အသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကားမောင်းမယ်ဆိုရင် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း နားလည်ဖို့လိုသလို၊ တိကျစွာ လိုက်နာဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ကိုင်ဖုန်း သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း………………………….
တယ်လီဖုန်းယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကို အများစု ဂရုမထားကြဘူးနော်။
တစ်ချို့ ကလည်း Ring Tone အထူးအဆန်းတွေထားလိုက်ကြတာလေ။
ဟိုတစ်နေ့က မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောနေရင်းမီးဥသြမှတ်လို့
လန့်သွားတာ။ နောက်မှ သူ့ဖုန်းလာတာလေ။
လုပ်ငန်းရှင်တွေက ringtone တွေကို အဲဒီလို ပေါက်ကရ သီချင်း တွေ ထည့်ထားတယ်လား?
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အခမ်းအနားတွေမှာ တယ်လီဖုန်း အသံမြည်တာဟာ အလွန် ရိုင်းတာ သေချာ ပါတယ်။
ကိုယ့် အသံကြောင့် သူများတွေ အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတာ သိသာထင်ရှား ပါတယ်။
မလုပ်ရလို့ ပြောထားတာကို သိသိကြီးနဲ့ ကျူးလွန် နေတာက တော့
စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အဆင့် နိမ့်ကျ နေခြင်း ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတာ မို့ဆင်ခြင်စရာပါဘဲ။
အခုဝင်တဲ့ တန်ဖိုးနည်း ဟန်းဆက်တွေ ဟာ မြန်မာသုံးစွဲသူ စိတ်ကြိုက်ဆောင်းဘောက်စ်တွေနဲ့ ကလား ။ ဖုန်းလာရင် ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ပေတစ်ရာလောက်က မသိရမှာ လုံးဝ မပူရဘူး ။
တယ်လီဖုန်း ယဉ်ကျေးမူ ဆိုလို့…တချို့တွေ ဖုံးမှားခေါ်မိရင် ခေါ်တဲ့သူက ဘာတစ်ခုမှထပ်ပြောမနေတော့ဘဲ ဂွပ်ခနဲဖုံးချပစ်တာတွေရှိပါတယ် အဲဒါ အင်မတန်ရိုင်းတယ်လို့ထင်တယ် အနဲဆုံးမှားဆက်တဲ့သူက တောင်းပန်စကားဖြစ်ဖြစ် ဖုံးမှားဆက်မိကြောင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောသင့်ပါတယ်…တဖက်က ဖုံးကိုင်တဲ့သူက အဲဒီဖုံးမှားခေါ်မိတဲ့အချိန်မှာ အရေးကြီးကိစ္စရှိရင်းနဲ့ ဖုံးကိုင်ရတာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ဖုံးမှားတဲ့အတွက် အနဲဆုံးအနှောက်အယှက်တော့ ဖြစ်ရမှာအမှန်ဘဲ..
အရီးလတ်ပြောတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။ အစည်းအဝေးမှာ တယ်လီဖုန်းသံမြည်တာ၊ တယ်လီဖုန်းကို ထင်သလို ပြောနေတာတွေဟာ တော်တော်ရုပ်ဆိုးပါတယ်။ အစည်းအဝေးမစခင် အခမ်းအနားမှုးက လက်ကိုင်ဖုန်းတွေ အသံပိတ်ဖို့ မဖြစ်မနေ သုံးကြိမ်လောက် သတိပေးရမှာပါ။ ဖုန်းမြည်လာမှ ပိတ်ခိုင်းရတာ ပိုဆိုးပါတယ်။
တစ်ခါက Vietnam Investor တွေနဲ့ မြန်မာ လုပ်ငန်းရှင်တွေ Sedona မှာ ဆွေးနွေးနေတုန်း Vietnam Co, တစ်ခုရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် စင်ပေါ်တက်ပြောနေတဲ့အချိန်၊ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးရဲ့ ဖုန်းမြည်လာပြီး ဖုန်းကို အသံအကျယ်ကြီးထပြောတော့ စင်ပေါ်မှာပြောနေတဲ့ Vietnam Investor က အရေးပေါ်ကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ထင်ပြီး စင်ပေါ်ကနေ ပြေးဆင်းမလိုလုပ်တော့ အခြားသူတွေက အားလည်းနာ၊ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ဆက်ပြောပါဆိုပြီး ပြောခိုင်းရတယ်။ ဖုန်းပြောသူအစား တော်တော်လည်းရှက်ခဲ့ရပါတယ်။
လက်ကိုင်ဖုန်းက အစည်းအဝေးမှာ အမြဲတမ်း အဲဒီလို အနှောင့်အယှက် ပေးနေကြပါ။
ဒါဟာ ဖုန်းကိုင်တဲ့သူရဲ့ အားနည်းချက်ပါ။
ဖုန်းသာကိုင်တာ ဖုန်းရဲ့ Ring Tone မြည်သံကို အသံတိုးအောင်
( သို့ ) အသံပိတ်အောင် မလုပ်တတ်သေးတဲ့ သူတွေအများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။
အခမ်းအနားမှူးရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးတာဝန်က အစည်းအဝေးမစခင်
အစည်းအဝေးခန်းမတွင်း တက်ရောက်လာသူတွေ အားလုံးရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်း Ring Tone မြည်သံကို
အသံတိုးဖို့( သို့ ) အသံပိတ်ဖို့ ကြိုတင်သတိပေးကျေညာပြီးမှ
အစည်းအဝေး အစီအစဉ်ကို စတင် ကျေညာသင့်ပါတယ်။
အလွှာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ဒီလိုဖြစ်တာ သိပ်မဆန်းတော့ပါဘူး။
တခါတလေ အစည်းအဝေး ဦးဆောင်သူကိုယ်တိုင် အစည်းအဝေး စကားပြောနေရင်း
သူ့ ရဲ့ ဖုန်း Ring Tone မြည်သံ ကြောင့် အစည်းအဝေး လာတက်သူတွေ
စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာတွေလည်း ခဏခဏကြုံနေရတာ ပိုဆိုးပါတယ်။
အစည်းအဝေး ဦးဆောင်သူ နဲ့ အစည်းအဝေး လာတက်သူတွေ ခဏခဏကြုံနေရတဲ့
ဖုန်းရဲ့ Ring Tone မြည်သံ ကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာတွေဟာ
လူကြီးတွေသီးသန့် ကျင်းပတဲ့ အစည်းအဝေးမှာတောင် စိတ်ပျက်လောက်အောင်
နောက်တစ်ခုက Ring Tone သံ ရွေးချယ်မှုပဲ။
ရာထူး၊အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Ring Tone ကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လည်းအကြံပြုလိုပါတယ်။
ဖုန်းယဉ်ကျေးမှု သင်တန်း(သို့ )ပညာပေး
ဘဲရောက်ပါစေ တယ်လီဖုန်းတွေ အတော့်ကို
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ.. ဆဲလ်ဖုန်းဥပဒေရှိတယ်..။ ကားမောင်းရင်းဆက်ရင်ဖမ်း..ဒဏ်ချတာ..။ အဲဒါမျိုးတခုလောက်လုပ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်..။ ဥပဒေအရ အပြစ်ဖြစ်တာမို့.. အဲဒီသက်ရောက်မှုက.. အစည်းအဝေးခန်းတွေထဲ.. တစုံတခုအကျိုးရောက်လာတတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်..။
Drivers are required to use hands-free equipment while talking on their cellular telephones. You can stay in compliance by purchasing hands-free kit equipment.
If you are caught violating this law, you will be charged the following fees plus additional penalty assessments:
First Offense: $20
Any Subsequent Conviction: $50
However, additional penalty assessments can end up tripling or more the total fee amount. In Sonoma County, for example,afirst cell phone-use offense will cost you, with penalty assessments, $160.
The conviction will appear on your driving record, but points will not be added. Also keep in mind, the law still applies if you are visiting the state of California and get caught talking on your phone while operatingavehicle.
Texting while driving also falls under this law.
As of January 1, 2009alaw against driving while reading, writing or sendingatext message went into effect. This applies to all forms of text-based communication, including e-mail and instant messaging.
This law pertains to all drivers, regardless of age or state of residence.
If caught, you will be charged:
$20 for first offense
Be aware that after penalty assessments are weighed in, fines could actually more than triple. According to the Uniform Bail and Penalty Schedule, with the addition of penalty assessments,afirst offense is $76 andasecond offense is $190.
သူကြီးကလဲဗျာ. နားမလည်ပါဘူးဆိုမှ ဘိုလိုဘဲရေးနေတော့တယ်ဗျာ။
နောက်တာနော်။မက်ဆေ့ခ်ျပို့ တာတောင်မှ မလွယ်ပါလားဗျာ။ဟူးးးး
ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါးအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာကို ရှက်ရမှန်းမသိတဲ့သူတွေ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိက္ခာကျရမှာကို ကြောက်ရမှန်းမသိတဲ့သူတွေ …
အရမ်းလဲများ နေရာလဲ ရနေကြတာကိုး….
တစ်ခါက အစည်းအဝေးတခုမှာ အဖွင့်အမှာစကားပြောနေတုန်း အဲဒီလူဆီ ဖုံးလာတယ်
(တကယ်တော့ အစည်းအဝေးတိုင်းမှာလာတာ အခုက အဖြစ်အပျက်တခုထဲပြောချင်လို့)
အဲဒါ အဲဒီဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်က အမှာစကားပြောနေတာရပ်ပြီး ဖုံးလက်ခံပြောတယ်။
ပြောတဲ့အကြောင်းအရာက သူ့တပြည့်တွေကို ညွှန်ကြားနေတာ…
ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ပြောပြီးမှ အစည်းအဝေးကိုလှည့်ပြီး သူ့အမှာစကားကို နိဂုံးချုပ်တယ်။
သတင်းလာယူတဲ့ ရုပ်သံဌာနတွေ၊ သတင်းထောက်တွေလည်းသတိပြုသင့်တယ်။
သက်ဆိုင်ရာသတင်းဌာနက အုပ်ချုပ်သူတွေအနေနဲ့ မိမိဝန်ထမ်းတွေကို သင်တန်းပေးထားသင့်တယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ရုပ်သံသတင်းတွေ ကြည့်ရတုန်းက မြည်လိုက်တဲ့ဖုန်သံတွေ အတော်ရှက်ဖို့ ကောင်းတယ်။
နိုင်ငံတကာတွေ အရေးတယူကြည့်နေတဲ့ သတင်းတွေမှာ ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
ရုပ်သံသတင်းဌာနတွေကလည်း မလိုလားတဲ့ အသံတွေဝင်မလာအောင်
နည်းပညာအဆင့်မြင့်တဲ့ မိုက်ခရိုဖုံးတွေ ရွေးချယ်သုံးစေချင်တယ်။
ဆေးခန်းထဲမှာ လူနာဖုန်းပြောနေလို. ထိုင်စောင်.လိုက်ရတဲ. အထူးကုတစ်ယောက်ကိုလည်း
တွေ.ခဲ.ဘူးတယ်ဗျ ။ သူ.ခမျာတနေကုန်နေမှ လူနာသုံးယောက်ဘဲလာတာဆိုတော. ဘာစည်းကမ်းမှ
လုပ်ငန်းရှင်တွေ သူတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းက သူတို့ ကိုယ်တိုင်
ချဲ လုပ်တဲ့ မီတင်မှာ သူတို့ လက်အောက်ငယ်သားတွေကို
ဒီလိုဖုန်းဖွင့်ထားဘို့ ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တာ သေချာပါတယ် အညာတမာရေ..
ဖုန်းတွေဈေး နဲနဲကျလို့ ကိုင်နိုင်သူတွေပေါလာတာတော့ ၀မ်းသာရမှာပေါ့..
ဒါပေမဲ့..အခု အညာတမာရေးပြသလို ထောက်ပြရင်း
လက်ကိုင်ဖုန်းကိုင်ပြီး လူမူရေးနားမလည်မှု့တွေကို ၀ိုင်းဝန်းပြုပြင်သွားကြရမယ်ဗျို့..
လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းစက်တွေရဲ့ Profiles ထဲမှာ Meeting ဆိုတာပါပြီးသားပါ။အစည်းဝေးတွေတက်ရင် အဲဒီ Meeting ကို ပြောင်းထားရမှာ မသိကြတာလား၊ မလုပ်ကြတာလား မပြောတတ်ဘူး၊ တစ်ချို့ကလည်း အစည်းဝေးခန်းထဲရောက်မှာ ဖုန်းပြောပြီးစတိုင်လုပ်ချင်ကြတာလဲရှိပါ့။
နောက်ဆို အစည်းဝေးခန်းထဲမှာ ဖုန်းပြောဆိုခြင်း မပြုလုပ်ဖို့ တားမြစ်စာတောင်ကပ်ရမလိုဖြစ်တော့မယ်။
ဖုန်းပြောခြင်းအတွက် ဥပဒေသစ်တခုကို လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းရလိမ့်မယ်.
၁. public area များတွင် အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ဖုန်းမပြောရ။
၂. ဆရာဝန်များလူနာများကို စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း ဖုန်းမပြောရ။
၃. အစည်းအဝေးခန်းမထဲတွင် ဖုန်းမပြောရ။
၄. Interview နေစဉ်အတွင်း Interviewer မှဖုန်းမပြောရန်။
ရွာသားများလည်း ထည့်ချင်တဲ့ အချက်များကို ထပ်ထည့်ကြနော်
အခုမှဘဲဖုန်းကိုင်ဘူးသူတွေကို ဘာတွေလုပ်ခိုင်းနေကြတာလဲ သူတိုမှာဖုန်း ဆက်တတ်ဘို့တောင်တော်တော် သင်ထား၇တာလေ အချိန်ကြာလာတော့လဲ ဒါတွေကိုတတ်ပြီးနောက်တော့၇ိုးသွးမှာပါ ဆက်တင်ထဲမှာဝင်ကလိလို့ ဖုန်းလော့ကျ သွားတာတွေ စတားခလုပ်က်ု အကြာကြီနိပ်မိလို့ ၇ိန်းသံမမြည် တော့တာတွေကိုနေ့စဉ် နဲ့အမျှ ဖုန်းဆိုင်တွေမှာ ဖြေ၇ှင်းနေ၇တာတွေ့နေ၇တယ် ကွန်ပြူတာ သုံးနေတဲ့ သူတွေတောင်လာမေးနေတာတွေ့၇ပါတယ် အခုမှဖုန်းလေးကိုင်ကာစဆိုတော့ လူမြင်စေချင်တာပါ ခွင့်လွတ်ကြပါနော် မကြာခင်မှာ ငါးသောင်းတန် ဖုန်းတွေလာလေ့မယ်လို့သတင်းထွက်နေတယ် တော်တော်များများ ကိုင်နိုင်တော့မှာပါ
ဖုန်းဝယ်နိုင်ရင် စည်းဂမ်းချိချိ ကိုင်ဘာ့မယ်
တစ်ခါတစ်လေ အစည်းအဝေးခန်းမမှာ Ring Tone ကို အသံကျယ်ကျယ်မြည်အောင်၊
စကားပြောသံ သူများမကြား ကြားအောင် တမင်လုပ်ရတဲ့ အခါရှိတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ အစည်းအဝေးလုပ်ရင် အချိန်မလေးစားကြဘူး။
ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ မဆိုင်တာတွေ ရောက် ရောက်သွားတယ်။
အချိန်ကလည်း လိုတာထက်ပိုကုန်တယ်။ ထပြန်ရလည်းအခက်၊ အားလည်းနာနေရတယ်။
နောက်ကိစ္စကလည်းရှိသေးတယ်။ ထိုင်လည်းမထိုင်ချင်တော့ဘူး။ ညီးငွေ့ စရာကောင်းလွန်းပြီး
စိတ်ပျက်စရာကောင်းလွန်းလို့ သီးမခံနိုင်တဲ့အဆုံး Ring Tone မြည်အောင် မသိမသာဖန်တီးပြီး
“ ဟဲလို…….ဟုတ်လား..ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ…အေးအေး ငါအခုချက်ချင်းလာခဲ့မယ်” လို့ 
လူတွေ မကြား ကြားအောင် အော်ပြောပြီး အစည်းအဝေးခန်းမကနေ ခပ်သုတ်သုတ်ပြေးထွက်ရတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ဆီမီနာ တခုမှာလည်း ၄ ခါလောက်ထမြည်တယ် ၁၀ နာရီခွဲလောက်ကနေ ၁ နာရီလောက်အတောအတွင်း ။ ဒါပေမဲ့ ring tone သံတွေ အဲ့လောက်မဆိုးဘူး။ သာမန်အသံတွေပါပဲ။ ပိတ်ဖို့မေ့တဲ့သူတွေ ထင်ပါတယ်။ ပြန်ဖြေသံမကြားဘူး။
ိဒီလောက်ကြီးကတော့ ကိုသစ်ပြောပြောနေတဲ့ အ၀ဲယားနက်တွေ ကျမတို့ ဆီမှာ အရေးတကြီး လိုနေပြီလို့ ပြနေတာပါ။
ဘိုး ဘိုး အောင် says:
ဘိုး ဘိုး တို့နယ် မြို့မှာတော့ ဟန်းဖုန်းသံ ရန်ကုန်လို မညံ သေးဘူး။ ၅၀၀၀ ကျပ်တန် ဆင်မ် ကပ် လာရင်သုံးတတ် အောင် တန်ဖိုး နည်းဟန်းဆက်ဝယ်ပြီး ဟန် ရေး ပြရှိုးထုတ် အလုပ် ရှုပ် နေ ကြ လေရဲ့ ကွယ် ။
တယ်လီဖုန်းမှာအသံမမည်ဘဲ တုန် အောင်လုပ်ထားလို့လဲရပါတယ်….
The Best ရေ Time Management ညံ့တဲ့သူတွေကိုတော့ တခြားနည်းနဲ့ သိလာအောင် လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အချိန်ဆိုတာ တန်းဖိုးအကြီးဆုံးအရာတခုပါ။ ဥပမာTime Management လိုသင်တန်းမျိုးပေးတက်တာတို့၊ အပြင်မှာ workshop တွေ တစ်ခြားလူတွေနဲ့အတူတက်ခိုင်းတာတို့၊ အများကြီးရှိပါတယ်။
အပြစ်မဟုတ်ပေမဲ့ သိအောင်တော့ပြောသင့်ပါကြောင်း The Best ရေ…..
မှန်ပါကြောင်း ကိုရင်မောင် ခဗျာင်္း….